वाणिज्य बैंकहरुको अवस्था कस्तो, कुन सबैभन्दा अब्बल ?
काठमाडौं : नेप्सेमा सूचीकृत २६ वटै वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कोरोना महामारीले अधिकांश बैंकहरुको वित्तीय सूचकमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । २६ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये केहीको खुद नाफा बढेको छ । तर अधिकांश बैंकको वितरण योग्य नाफा भने घटेको छ ।
केहीको भने वितरण योग्य नाफा पनि ऋणात्मक देखिन्छ । यसैवर्ष जनता बैंकसँग मर्जर गरेकाले ग्लोबल आइएमई बैंकको भने अधिकांश वित्तीय सूचक मजबुत भएको देखिन्छ । यता, नाफा, चुक्ता पुजी लगायतमा ग्लोबल आइएमई, प्राइम, एनएमबि, मेगा लगायतका बैंकको ठूला संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन गरेका कारण पनि धेरै वृद्धि देखिएको हो । हेरौं, २६ वाणिज्य बैंकमा कुनको अवस्था कस्तो ?
१९ वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा १९ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी बढेको छ । ७ बैंकको पुँजी भने गत वर्षकै यथावत रहेको छ । यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै पुँजी बढाउनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ ।
यस बैंकले अघिल्लो वर्ष जनता बैंकलाई गाभेकाले चुक्ता पुँजीमा आकर्षक वृद्धि भएको हो । एक वर्षको अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ८१.८२% ले बढेर १८ अर्ब ९७ करोड ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो नै सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको बैंक हो ।
२४ बैंकको जगेडा कोष बढ्यो
असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा २४ वटा बैंकको जगेडा कोष बढेको छ । प्रभु र सानिमा बैंकको जगेडा कोष भने घटेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढाउनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ ।
यस बैंकको जगेडा कोष १३०.९१% ले बढेर ९ अर्ब २६ करोड ७१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष नेपाल बैंकको १३ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
११ बैंकको खुद ब्याज आम्दानी बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ११ बैंकको खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ । यता, १५ बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने घटेको छ । सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी बढाउनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ ।
यसको खुद ब्याज आम्दानी ६५.७५% ले बढेर २ अर्ब ५९ करोड ३६ लाख ९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो नै सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी भएको बैंक हो । एभरेष्ट, नेपाल, प्रभु, कुमारी, प्राइम, नबिल, एनएमबि, सिद्धार्थ, एनआइसी एसिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकको ब्याज आम्दानी १ अर्ब माथि छ ।
९ बैंकको नाफा बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ९ बैंकको खुद नाफा बढेको छ । यसअवधिमा १७ बैंकको खुद नाफा भने घटेको छ ।सबैभन्दा धेरै नाफा बढ्ने वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नेमा एनएमबि बैंक रहेको छ । तथापि, बैंकले अहिले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको नाफा मिल्दैन । यो वित्तीय विवरणलाई लिएर व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ ।
तथापि, बैंकले यस सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण किन गत वर्षको भन्दा भिन्न भयो भनेर अहिलेसम्म प्रष्टिकरण दिएको छैन । यो वर्ष सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष एनएमबि बैंकको नाफा २७ करोड १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष बैंकले ७३ करोड २९ लाख ७० हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा ८१ करोड ५१ लाख नाफा कमाएको थियो ।
यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक छ । बैंकको नाफा ४०.५८% ले बढेर १ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जनता मर्ज गरेकाले पनि ग्लोबलको नाफामा भारी वृद्धि देखिएको हो । यस्तै, मेगा, प्राइम बैंकको नाफामा पनि एक्वायरको प्रभाव देखिन्छ ।
५ बैंकको मात्रै वितरण योग्य नाफा बढ्यो
असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ५ बैंकको मात्रै वितरण योग्य नाफा बढेको छ । वितरण योग्य नाफा बढ्नेमा नेपाल, कुमारी र प्राइम कमर्सियल, नबिल, र एनसीसी बैंक रहेका छन् । सभैभन्दा धेरै वितरण योग्य नाफा बढ्नेमा नेपाल बैंक रहेको छ ।
बैंकको वितरण योग्य नाफा १९९.१९% ले बढेर १९ करोड ६४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै वितरण योग्य नाफा नबिल बैंकको १ अर्ब २० करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ छ । यता, सिभिल, सनराइज, सिद्धार्थ, सेन्चुरी, बैंक अफ काठमान्डू र सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने ऋणात्मक छ ।
८ बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ८ बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ४९ पैसाले बढेर २२ रुपैयाँ ६९ पैसा पुगेको छ ।
यता, सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी एनआइसी एसिया बैंकको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपैयाँ ३६ पैसाले बढेर ४२ रुपैयाँ १४ पैसा पुगेको छ । १८ बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी भने घटेको छ ।
(नोट : कतिपय बैंकको नाफा तथा चुक्ता पुँजी लगायतका विवरण धेरै वृद्धि तथा अन्तर हुनुमा मर्ज तथा एक्विजिसन पनि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।)